उपक्षेत्रीयमा ५० शैय्याको बहुउद्देश्यीय भवन शिलान्यास - Karobar National Economic Daily
उपक्षेत्रीयमा ५० शैय्याको बहुउद्देश्यीय भवन शिलान्यास
query_builderJuly 16, 2017 10:20 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility5145
दाङः राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा ५० शैय्याको बहुउद्देश्यीय अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिएको छ । दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी योजना सम्झौता गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
भवन निर्माणसँगै अस्पतालको क्षमता १ सय ५० शैय्याको हुनेछ । अस्पतालमा हाल १ सय शैय्या सञ्चालन छ । २०७१ साल साउन १ गतेदेखि अस्पताल १ सय बेडमा विस्तार भएको थियो । महेन्द्र हेल्थ सेन्टरबाट विकास हुँदै अस्पताल उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको हो ।
निकट भविष्यमा अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा आउने भएको छ । त्यस अनुसार काम भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । भवन १६ करोड २२ लाख ९४ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो । निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएर काम सुरु भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले बताए ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ५ सय शैय्या आवश्यक पर्ने प्रशासनले जनाएको छ । “भवनको निर्माण सुरु भएको छ ।” अस्पतालका मेसु डा. पन्थीले भने, “अबको दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सकेर सेवा दिने छौं ।” राप्ती अञ्चलको पुरानो अस्पताल भएकाले यहाँ बिरामीको चाप नै छ । ओपडीमा मात्र दैनिक ४ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
उपक्षेत्रीय अस्पताल भए पनि पर्याप्त मात्रामा विशषज्ञ डाक्टरको अभाव छ । मानसिक, नाक कान र घाँटीलगायतका विशेषज्ञ डाक्टर अस्पतालमा छैनन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार १ सय ९० जना कर्मचारी आवश्यक भए पनि १ सय २१ जना कार्यरत छन् ।
अस्पतालमा स्थायी ७९ जना र करारमा ३१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । अस्पतालले आफनै फार्मेसी चलाएको छ भने मिर्गौला पीडितको उपचारको लागि हेमोडायलाइसिस सेवा समेत थालेको छ । यो सेवा लिने अस्पतालमा ९ जना छन् ।
त्यसै गरेर आइसियु र एनआइसियु सञ्चालनको लागि समेत अस्पतालले तयारी थालेको छ । “क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म सेवा दिने गरेका छौं” अस्पतालका मेसु डा. पन्थीले भने, “तर भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावले नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप सेवा दिन सकेका छैनौं ।” उनका अनुसार अस्पतालमा अझै पनि अपेक्षाकृत रूपमा विशषज्ञ डाक्टरको अभाव छ ।
“विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी पूरा हुन सकेको छैन । तर पनि सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भएको छ” उनले भने “ विशेषज्ञ डाक्टर दरबन्दी पूरा भएमा सेवा अझै प्रभावकारी बन्छ ।” भवनको शिलान्यास उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेका हुन् ।
शिलान्यास गर्दै मन्त्री महराले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गरिने बताए । सुविधायुक्त अस्पतालको रूपमा यो अस्पतालले बार्मे सर्दै छ । “यो अस्पतालसँग धेरै सम्भावना छन्” मन्त्री महराले भने, “यसको विकास गरेर यो प्रदेशकै नमुना अस्पताल बन्नेछ ।” उनले अस्पतालको विकासका लागि केन्द्रबाट हुने सबै सहयोग गर्ने वचनसमेत दिए ।
“हामीले विगतदेखि प्रदेश राजधानी दाङ बनाउनु पर्छ भन्दै आएका छौं । यो अस्पतालको भवियय त्योसँग पनि जोडिएको छ” उनले भने, “त्यसकारण यसको विकासका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।” उपप्रधानमन्त्री महराले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम समेत तत्काल थाल्ने बताए ।
कार्यक्रममा सांसद राजु खनालले राप्तीको केन्द्रविन्दुमा रहेको अस्पतालको विकासका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए । अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विकास हुँदै छ” सांसद खनालले भने, “अब त्यो अनुसार भौतिक पूर्वाधार बन्नेछन् ।
नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यहींबाट पाउनेछन् ।” घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले अस्पतालको विकासको लागि स्थानीय तहवाट गरिने सहयोग गर्न आफू तयार भएको बताए ।
उनले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उपमहानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा समेत गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मीले भवन निर्माणको लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताइन् । “मुलुक संघीयतामा गएको छ ।
अब नयाँ संरचनाअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा समेत जानेछ” उनले भनिन्, “सबै ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने काम हुनेछ ।” क्षेत्रीय निर्देशक गीता भण्डारीले समेत विचार राखेकी थिइन् । त्यस अवसरमा अस्पतालले दिंदै आएको हेमो डायलाइसिस सेवाको समेत विधिवत् सुरुवात गरिएको थियो ।
अस्पताल भौतिक पूर्वाधार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल